Soo dejisan Avast 12.3.3154 Free Antivirus... – Windows – Vessoft
Avast – software caan ah antivirus si ay u ilaaliyaan aad computer. software The ogaadaa oo tiraa fayrusyada, Trojans, Gooryaanka, spywares iyo noocyada kale ee hanjabaad. Avast kuu ogolaanaya in aad si loo badbaadiyo passwords ee foomka Windows XP oo qeexaya isku halaynta ee passwords in ay ku kaydsan yihiin in browser ah. software The waa awoodaa in la ogaado nuglaanta of network guriga iyo qalabka ku xiran in ay. Avast u saamaxaaya in ay gab ama ka saar gaadmada ah adigoo kordhin of browser ah. software The taageertaa shaqo ee hago of computer la soo dhex maro xiriir la ilaaliyo by code gaar ah.
updates joogtada ah ee database fayraska
Ammaanka ee sirta ah
Protection of network gurigaaga
Banaynta of browser
English, Français, Deutsch, Italiano... SmadAV 11
Українська, Français, Español, Deutsch... Cool Reader 3.3.61